1000 ariary ny saran-dalana rehefa mihoatra ny fasika eo Ankadimbahoaka, hoy ny mpanjifa iray. Mandray olona amin'izay itiavan'ny mpamily azy amin'iny By pass iny ny fiara ary rehefa tenenina dia milaza fa tsy misy fiantsonana voafaritra na “arrêt obligatoire” eny amin’iny faritra iny, hoy hatrany ny fanazavana. Mirifatra be dia mijanona tampoka fa hampiditra olona. Tsy mahagaga raha betsaka ny lozam-pifamoivoizana amin'iny By pass iny. Raha tsy tafajanona tampoka ny fiara aoriana dia hifandona eo, hoy hatrany ny fitarainan’ny mpanjifa.